Semalt Expert dia mamaritra 12 toro-hevitra izay hanampy anao hisorohana ny cybercurrent
Ny cyberstalking dia mety mampatahotra, saingy raha mijanona ho mailo ianao, dia mety ho voaro amin'ny aterineto.
Rehefa manao ireto dingana manaraka ireto avy amin'ny Senior Sales Manager Semalt , Ryan Johnson, azonao atao ny mampiasa ny findainao, ny tablette, na ny fijerena mafimafy rehefa miaro ny maha-ianao anao, ny fananana, ary ny fahadiovana:
# 1. Tandremo ny adiresinao an-trano
Rehefa mameno endritsoratra anaty aterineto ianao, ampiasao ny P.O. boaty na adiresy asa ary tsy manana adiresy an-tranonkalanao mivantana.
# 2 - riscaldatore ceramico. Ny Password dia miaro ny kaonty rehetra
Ampiasao ny tenimiafina amin'ny zavatra rehetra, toy ny findainao, kaonty mailaka, kaonty kaonty sy kaonty momba ny kaonty. Ny tenimiafina azo antoka dia manome mody fiarovan-tena amin'ny olona mitady hanisy ratsy anao.
# 3. Mitadiava ny anaranao sy ny nomeraon-telefaona amin'ny Internet
Ny fikarohanao ny nomeraon-telefaona sy ny anaranao amin'ny aterineto dia afaka manajanona ny cyberstalker tsy hamorona kaonty craigslist, bilaogy, na tranonkala mifototra aminao.
# 4. Alefaso imailaka, antso ary andininy mangataka fampahalalana
Ny cyberstalkers dia matetika misolo tena ny solontenan'ny banky, ny solosaina, ny solontenan'ny orinasa, na ny finday amin'ny finday mba hangalarana ny mombamomba azy. Raha mahazo hafatra mampiahiahy ianao, dia tadidio fa miantso ny banky na orinasa mivantana.
# 5. Tandremo ny laharan'ny fiahiana ara-tsosialy
Aza omena laharam-pahamehana ara-tsosialy raha tsy efa nanamarina fa miara-miasa amin'ny orinasa izy ireo. Aza miditra ao amin'ny tranonkala iray na oviana na oviana ny nomeraon'ny fiantohana sosialy raha tsy ampiharin 'ny orinasa iray na ny orinasam-panjakana izany.
# 6. Ampiasao ireo mpizarazara fitaterana maimaim-poana manorata ny fifamoivoizana amin'ny blôginao sy ny tranonkala
Ampiasao ny mpanohitra ny staty hamantarana hoe iza no mitsidika ny tranokalanao na ny blôgy. Ireo tsipika ireo dia manoratra ny adiresy IP, ny tanàna, ny daty, ny fanjakana, ny ora, ary ny mpanome tolotra aterineto an'ny mpampiasa..
# 7. Araho ny sata mitovy aminao
Ny manampahaizana momba ny raharaham-barotra na ny maso imasom-bahoaka dia mila manara-maso indroa isan-taona amin'ny toerany, indrindra raha azo atao ny cyberstalking. Ny kopia maimaim-poana amin'ny tatitra bola dia azo atao indray mandeha isan-taona avy amin'ny biraon'ny credit. Ny fandraisana ny tatitra avy amin'ny birao fampindramam-bola dia tsy manimba ny fanamarinanao.
# 8. Avereno atao ny tenimiafina aorian'ny fisaraham-panambadiana na atsaharo
Mifandraisa amin'ny orinasan'ny banky sy ny carte de crédit ary avelao izy ireo hahafantatra fa ny vadinao taloha na taloha dia tsy mahazo miditra amin'ny kaontinao. Na dia sarotra aza ny fialamboly, dia miaro sy miaro tena.
Raha te-hitandrina bebe kokoa ianao dia hividy finday vaovao sy karatra vaovao ary ahafahanao manova haingana ireo fanovana ireo.
# 9. Amboary ny kaontinao rehetra raha toa ka ahiana ny cyberstalking
Ambarao ny kaontinao rehetra. Raha azonao antoka fa lasa cyberstalked ianao, jereo ny isa nomenao ary hahita banky vaovao. Ity dingana ity dia tokony horaisina raha mahita marimaritra iraisana mihoatra ny roa mampiahiahy ianao ao anatin'ny iray volana.
# 10. Asaivo dinihina amin'ny solosaina ny PC
Rehefa fantatrao fa lasa cyberstalked ianao, dia tokony hiaiky fa ny computer-nao dia iharan'ny herisetra. Raiso ny ordinateranao sy ny fitaovana hafa ho an'ny matihanina ary asaivo manara-maso azy ireo amin'ny kankana sy ny spyware.
# 11. Ataovy haingana ny fisamborana cyberstalker
Rehefa fantatrao fa manao fihetsika maimaim-poana ianao amin'ny aterineto mba hiarovana ny mombamomba anao sy ny fiarovana ara-bola. Ny haingananao dia manao ny fahasarotan-javatra hanoheranao, ka mahatonga anao ho lasibatra tsy dia mahaliana.
# 12. Miezaha be dia be
Ny fanorisorenana dia mety hiteraka hetraketraka ara-pihetseham-po ary hampisy fiantraikany amin'ny tebiteby. Raha azonao atao, dia manakarama mpitsabo iray izay manasokajy ny fikolokoloana hiatrehana ny vokatr'izany.
Ny Cyberstalking dia heloka bevava henjana ho an'ny polisy mba hisakanana azy, noho izany dia mila miezaka ny hiaraka hiaina miaraka ianao. Saingy tadidio fa ny mpamaky anao amin'ny Internet dia manana fahefana bebe kokoa eo aminao rehefa mamela azy ireo ianao.